Kabary ampanambadiana |
Wiki Jereo Ato
Ny rakim-pahalalana tena malagasy
Tompokolahy sy Tompokovavy;
Sodisodika railovy, rimorimo andiam-boromanga, manitra vonifanja re ny tsioka fa mahatsara vahiny ny eto(lazaina ny anaran’ny toerana ikabariana) ankehitriny.
Anio mantsy, ilay andro iray toa zato, ny tapany be noho ny erany, ny silany tsy atakalo ny manontolo. Ekena fa ny fianakaviana avy art amin’ny zatovovavy foana no andrasana amin’ny fotoana sahala amin’izao, nefa ny manontany tsy ananam-pondro tompoko. Satria ny mpaka afo aza mbola manatsafa ho voninahitry ny tokonana hodinganina na dia efa hita izao aza fa midonaka ny tapenaka, mainka ve fa izahay manoloana ny haja amam-boninahitra hanananareo. Koa tsy hisosososo toa vinanto tsy mandre fosa akory, nefa koa tsy hitonantonana toy ny hava-tsy nalaina fa ny kely mifanaika dia tahotra, ary ny lehibe mifanaiky dia henatra. Koa hoy ny antsafanay manao hoe: moa efa afaka miroso amin’ny dinika ve tompoko sa mbola misy ny handrasana? Moa efa eto va ireo sahafa be mahasivana, ny antsibe mahatapaka ary ny fanjaibe mahavitrana?
Manotany izany izahay soa manerana vao manao mbay lalana, sao lasa mpifosa vao mifafa trano, ka lasa ny varatra vao mitsoka havozo. Raha toa ka efa eto ary izy ireo, dia tsara raha miroso amin’ny dinidinika sy ny tapatapak’ahitra ary ny torotoro ravina isika. Raha misy antony manokana mbola tsy ahafahana miroso amin’izany anefa, dia maneho ny fahavononana hiandry hatramin’ny farany izahay. Na izany aza anefa tsarovy, fa ny andraso andraso, hono, mahariva ny andro ary ny andao andao mahavery ny entana. Hosoavin’Andriamanitra amin’izay valin-teny hasetrinareo ny antsafanay izay anie ianareo.
Eny ary Tompokolahy sy Tompokovavy;
Misaotra nanontany fa raha ny fianakaviana moa dia mirantsana tahaka ny lalan-kely tokoa, satria heniky ny lafin-kavana ny lafy valo. Araka izany, miandry teza ho lavo eto isika raha ny fianakaviana no andrasana ho vory.
Koa ento ary ny dinika fa ianareo no nandrasana. Mialoha izany anefa, handeha hapetraka eo ambany fitariana’Andriamanitra izao fotoana izao satria « Raha tsy i Jehovah no manao ny trano, dia miasa foana ny mpanao azy. » Koa manainga am-panajana ny tompon’anjara amin’izany.
Author: mahefa on mars 11, 2018
Categories: Kabary, Kabary Ampanambadiana
Tags: hafaliana, kabary
Famangina tera-bao «» Fiarabana vita Batisa na Batemy
Kabary famangiana marary
Fiarabana vita Batisa na Batemy
Last update on avril 3, 2018
Published mars 11, 2018
© 2018 Wiki Jereo Ato | Site par le soin de Mahefa & Company